ကျွန်တော်လွတ်ကျခဲ့တဲ့မြို့တော်: ပြောင်းလဲမှုများနောက် တကောက်ကောက်လိုက်မိခြင်း …
ပြောင်းလဲမှုများနောက် တကောက်ကောက်လိုက်မိခြင်း …
၂၀၀၇ ခု၊ ဒီဇင်ဘာလထုတ် ချယ်ရီမဂ္ဂဇင်းမှာ ရေးခဲ့တဲ့ ဆောင်းပါးလေးပါ ... ။ ဘလော့ဂ်တွေခေတ်စားလာလို့ ဘလော့ဂ်အကြောင်းလေး ရေးပေးပါဆိုတာနဲ့ အင်ထရို(Intro) များများ၊ ဘလော့ဂ်အကြောင်းနဲနဲ နဲ့ နည်းပညာအသစ်တစ်ခုကို မိတ်ဆက်တယ်ဆိုရုံလေးရေးလိုက်တာပါ ...။ အွန်လိုင်းက သူငယ်ချင်းတွေဖတ်ဖို့ ကျွန်တော့်ဘလော့ဂ်လေးမှာ ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ...။ ထူးထူးခြားခြား www.thanlwin.com/thanlwinainmat (သံလွင်အိပ်မက် အွန်လိုင်းမဂ္ဂဇင်း) ဆိုတဲ့ စာသားကို စာပေစီစစ်ရေး ကဖြုတ်ခိုင်းလို့ ဖြုတ်ပေးလိုက်ရပါသေးတယ် ...။း-)
တစ်နေရာစီဝေးနေကြတဲ့သူအချင်းချင်း တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဆက်ဆံပြောဆိုတဲ့နေရာမှာ လွယ်ကူအဆင်ပြေမှု တွေရှိလာအောင်၊ မိမိပြောချင်တာကို အခြားသူက သေသေချာချာ သဘောပေါက်နိုင်အောင် ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ ကြားခံ မီဒီယမ်တွေကို အသုံးပြုလာကြခြင်းဟာလဲ စာပေရေးဖွဲ့ခြင်းရဲ့ အစလို့ ယူဆလို့ရပါတယ်။ နောက်ပြီး ဘယ်အရာကိုမဆို ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့မှ သိရတယ်ဆိုရင် အဲဒီ့သူရဲ့အသိဟာ တစ်ဘ၀စာလုံးအတွက် မလုံလောက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ သဘောတရားကို သူတို့ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ ကာလတွေက လူတွေရဲ့စိတ်ထဲကို ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ် …။ အဲဒါကြောင့်လဲ မျှဝေခြင်း (Sharing) ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကြီးမှုကို နားလည်လာကြပြီး အသိပညာ၊ အတတ်ပညာ၊ အတွေးအခေါ်၊ အယူအဆ၊ အတွေ့အကြုံ၊ အတွေးအမြင်တွေကို တနည်းနည်းနဲ့ နှီးနှောဖလှယ်မှုတွေပြုလာကြပါတယ်။ ဒါဟာလဲ မျက်မှောက်ခေတ်အထိအောင် အရှိန်အဟုန်မပျက်စီးဆင်းနေတဲ့ စာပေရေစီးကြောင်းရဲ့ အသက်ပဲလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ကျောက်ခေတ် … … ကျောက်နံရံတွေ၊ ကျောက်တုံးကျောက်ခဲ တွေပေါ်မှာ အက္ခရာဆိုတာ မပေါ်သေးခင်ကာလ မြင်သမျှ၊ တွေ့သမျှကို ပုံတူလေးတွေဆွဲပြီး ရေးဆွဲတင်ပြကြတာကို ကျွန်တော်တို့ တွေ့ရပါတယ်။ ပြီးတဲ့အခါ ပေတွေ၊ ကညစ်တွေပေါ်မှာရေးကြတယ် …။ နောက်တော့ … ကျောက်သင်ပုန်း … ပြီးတော့ … စာရွက်တွေပေါ်လာပြီး လူတွေ လူတွေ … ခံစားချက်တွေ၊ အတွေးအမြင်တွေ၊ အယူအဆတွေ၊ အဖြစ်အပျက်အကြောင်းအရာတွေကို နှလုံးသားထဲမှာ၊ ဦးနှောက်ထဲမှာတင် သိမ်းမထားကြတော့ပဲ … တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ဖလှယ်ကြဖို့အတွက် အလျဉ်းသင့်ရာနည်းနာတွေနဲ့ လှစ်ဟတင်ပြလာကြတယ်။ တင်ပြတယ်ဆိုရာမှာလဲ ကိုယ် ရေးတဲ့စာ ၊ ကိုယ်ဖန်တီးတဲ့ အနုပညာကို ဘယ်သူတွေကို ပြချင်တာလဲ ဆိုတာကို ကိုယ်တိုင်က ရွေးချယ်ကြရတယ် နောက်ပြီး တိုးတက်လာတဲ့ ခေတ်ကာလနဲ့အညီ အသုံးချတဲ့ မီဒီယာတွေအပေါ်ကိုမူတည်ပြီး ကိုယ့်ပေးချင်တာတွေရဲ့ ပျံ့နှံ့မှုအား ကွာခြားသွားတာကိုလဲတွေ့ရပါတယ် …။
ဥပမာအနေနဲ့ … ကျောက်ခေတ်ကလူတွေ သူတို့နေတဲ့ ကျောက်ဂူနံရံတွေပေါ်မှာ ပုံတွေဆွဲကြတယ် … နောက်ပိုင်းမှာ အက္ခရာဆိုတာတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့ အမှတ်အသားတွေကို ရေးခြစ်ကြတယ်။ သူတို့မှာ ဒီလိုရေးခြစ်ထားတာတွေကို ဘယ်သူ့ကို ပြချင်တာလဲဆိုရင် … ယောင်္ကျားတစ်ယောက်က သူ့ချစ်သူရဲ့ပုံတူ ကိုဆွဲပြီး သူ့ချစ်သူကို ပြချင်တာမျိုး … ဖခင်တစ်ယောက်က အပြင်မှာသူတွေ့ကြုံလာရတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ အကြောင်းကို ပုံတူတွေဆွဲပြပြီး သူ့သားသမီးတွေကို ပြချင်တာမျိုး၊ ဒါမှမဟုတ် မျိုးနွယ်စုတစ်စုရဲ့ ခေါင်းဆောင်ဆိုရင် … သူ့လက်အောက်ငယ်သားတွေကို အချို့သော အကြောင်းအရာတွေကို သင်ပြပေးဖို့ ဒီလိုပုံတွေ၊ စာတွေရဲ့အကူအညီကိုယူပြီး သင်ပြပေးချင်တာမျိုးတွေလောက်ပဲရှိမယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။ နောက်ပိုင်း … အဲဒီ့နေရာကို သူတို့တွေစွန့်ခွာသွားတဲ့အခါမှာလဲ အဲဒီ့နေရာကို ရောက်လာတဲ့ အခြားသောသူတွေကသာ အဲဒီ့ပုံတွေ၊ စာတွေကို မြင်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် … သူတို့ဆွဲတဲ့ပုံတွေ၊ စာတွေရဲ့ ပျံ့နှံ့မှုအားဟာ မရှိသလောက်ကို နဲတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ် …။ အဲဒီ့နောက်ပိုင်း … ကျောက်ဂူနံရံတွေမှာ မရေးကြတော့ပဲ သယ်ဆောင်နိုင်တဲ့ ကျော်လွှာအချပ်တွေပေါ်မှာ ရေးလာကြပြီး တစ်နေရာကနေ တစ်နေရာကို ယူသွားပြလို့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်လာပါတယ်။ တစ်နေရာတည်းမှာ အသေရှိနေတာနဲ့ယှဉ်ရင် ပျံ့နှံ့နိုင်မှုနဲနဲရှိလာပြီလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျောက်တုံး၊ ကျောက်လွှာတွေရဲ့ လေးလံမှု၊ ၀န်ကျယ်မှုတွေကြောင့် တစ်နေရာကနေ တစ်နေရာကို အလွယ်တကူမပျံ့နှံ့တာမျိုးတွေဖြစ်လာပါတယ်။ ကျောက်ခေတ်အလွန်မှာ ပေတွေ၊ ကညစ်တွေ၊ ကျောက်သင်ပုန်းတွေကို သုံးပြီး ရေးလာကြပါတယ် …။ ကျောက် လွှာကျောက်သားတွေပေါ်မှာ ရေးကြတာနဲ့ယှဉ်ရင် သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူတာကြောင့် ပျံ့နှံ့အား ပိုကောင်း လာတာ မှန်ပေမယ့် … ကြာရှည်ခံမှုမခံမှုဆိုတဲ့ ပြဿနာတစ်ခုက ပေါ်လာပါတယ်။ အဲဒီ့နောက်မှာတော့ စာရွက်တွေပေါ်လာပါတယ် …။ စာရွက်ပေါ်မှာရေးကြသလိုပဲ … စာအုပ်စာပေတွေကို ဖြန့်ဝေပေးနိုင်တဲ့ မီဒီယာတွေပေါ်လာတာကြောင့် … ပျံ့နှံ့မှုအားတော်တော်လေးကို ကောင်းလာပါတယ်။ ကြာရှည်ခံခြင်း မခံခြင်းဆိုတဲ့ ပြဿနာက ရှိနေသေးပြန်တာကြောင့် … ကာလအတော်ကြာက စာရွက်စာတမ်းတွေ၊ စာပေလက်ရာတွေကို မပျောက်မပျက်ထိမ်းသိန်းထားဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာ အခက်အခဲတွေရှိလာပါတယ်။ အဲဒီ့နောက်မှာတော့ ကွန်ပျူတာဆိုတာ ပေါ်လာပါတယ် …။ စာတွေ၊ ပုံတွေ၊ သတင်းတွေနဲ့ အခြား အနုပညာလက်ရာတွေကို ကွန်ပျူတာကနေတဆင့်ဖန်တီးကြပါတယ် …။ အပြင်မှာရေးထား၊ ဆွဲထား တာတွေကိုလဲ ကွန်ပျူတာတွေနဲ့ သိမ်းဆည်းလာကြပါတယ်။ စာတွေ၊ ပုံတွေကို ကွန်ပျူတာတွေကနေတဆင့် CD , Floppy Disc လေးတွေထဲထည့်ပြီး တစ်နေရာကနေ တစ်နေရာကို ၀န်ကျဉ်းကျဉ်းနဲ့ ကူးပြောင်းပျံ့နှံ့စေနိုင် တဲ့ အနေအထားတစ်ခုကိုရောက်လာပါတယ် …။ အဲဒီ့ အခြေအနေနဲ့ တပြိုင်နက်တည်းလိုလိုမှာပဲ … ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်း (Globalization) ကမ္ဘာမှုပြုခြင်း ဆိုတဲ့ စကားလုံးနဲ့အတူ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှာရှိတဲ့ ကွန်ပျူတာတွေ အချင်းချင်းကို ချိတ်ဆက်ပေးနိုင်တဲ့ အင်တာနက် (Internet) ဆိုတာကြီးပေါ်လာပါတယ် …။ modem တစ်ခုကိုသုံးပြီး ဖုန်းကြိုးနဲ့ ကွန်ပျူတာကို ချိတ်ဆက်၊ ပြီးရင် ISP (Internet Service Provider) တစ်ခုကနေ အင်တာနက် အသုံးပြုခွင့်ကိုလျှောက်ထားပြီးပြီဆိုရင် Browser (Mozilla Firefox, Internet Explorer … ) တစ်ခုခုကိုသုံးပြီး ကမ္ဘာအနှံ့ဖြန့်ကျက်ထားတဲ့ကွန်ယက် ( www = World Wide Web ) ကြီးထဲမှာရှိတဲ့ စာတွေ၊ ပုံတွေ၊ သတင်းတွေ၊ အနုပညာလက်ရာတွေ … အစရှိတဲ့ အားလုံးအားလုံးကို ကွန်ပျူတာရှေ့ထိုင်နေရုံနဲ့ ကြည့်မြင်ခံစားနိုင်တဲ့ အခြေအနေတစ်ခုကို ရောက်လာပါတယ်။ အဲဒီ့အခါမှာ ကိုယ်ပေးချင်တဲ့ သတင်းအချက်အလက်၊ ကိုယ်ဖန်တီးထားတဲ့ အနုပညာလက်ရာတစ်ခုခု၊ ကိုယ်ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ဘ၀တစ်ခုထဲက ကိုယ်ရရှိလိုက်တဲ့ အတွေ့အကြုံ အတွေးအမြင်တွေ စတာစတာတွေကို အများနဲ့ ဖလှယ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက် အဲဒီ့ကွန်ယက်ကြီးကို ကြားခံနယ်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုပြီး … ပျံ့နှံ့မှုအတိုင်းအတာကို ချဲ့ထွင်ရယူလာကြပါတယ်။ ဥပမာအနေနဲ့ ပြောရရင် မြန်မာ ဘာသာနဲ့ ရေးသားထားတဲ့ မဂ္ဂဇင်းတစ်အုပ်ကို ပြည်တွင်းမှာထုတ်ဝေတယ်ဆိုရင် ပြည်တွင်းကလူတွေ ဒီမဂ္ဂဇင်းကို ဖတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် …။ ဒါတောင် ဖြန့်ဝေမှုပုံသဏ္ဍာန်ပေါ်ကို လိုက်ပြီး တစ်ပြည်လုံးအတိုင်းအတာ ဖတ်နိုင်မှုရှိမရှိဆိုတဲ့ ချွင်းချက်တွေရှိနိုင်ပါသေးတယ်။ အခြားနိုင်ငံကို ရောက်နေတဲ့ သူတွေအထိပါ ပျံ့နှံ့ချင်တယ် ဆိုရင်တော့ မြန်မာတွေများတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့ တစ်ဦးဦးနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီး စာအုပ်တွေ ပို့ပေးလို့ ရနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာလဲ အခက်အခဲတွေများစွာရှိပါတယ် …။ အဲဒီ့တော့ … အင်တာနက်ပေါ်မှာသာ Domain Name တစ်ခုနဲ့ Hosting တစ်ခု ယူထားပြီး website တစ်ခုအနေနဲ့တင်ထားမယ်ဆိုရင် အဲဒီ့ website လိပ်စာကိုသိကြတဲ့ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးက မြန်မာတွေအကုန်လုံးဖတ် နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ ။ www.people.com.mm (People Magazine) , www.first11.com (Eleven Media Group မှဂျာနယ်များ), www.thanlwin.com/thanlwinainmat (သံလွင်အိပ်မက် အွန်လိုင်းမဂ္ဂဇင်း) . အင်တာနက်တွေပေါ်လာတဲ့ ခေတ်မှာ website တွေကို အသုံးပြုလာကြတာဟာ အရင့်အရင်ခေတ်တွေက လိုအပ်ချက်တွေဖြစ်တဲ့ ပျံ့နှံ့မှုအားနည်းခြင်းနဲ့ ကြာရှည်မခံခြင်းဆိုတဲ့ အချက်တွေကို အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ဖြည့်စွက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် website တစ်ခု တည်ဆောက်ချင်တယ်ဆိုရင် … ပထမဆုံးအနေနဲ့ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ Domain Name ကို အရင်ဆုံးဝယ်ရပါတယ် …။ အများအားဖြင့်တော့ နှစ်စဉ်ကြေးပေးရပါတယ် …။ နောက်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့ website တွေမှာ တင်ချင်တဲ့ စာတွေ၊ ပုံတွေ၊ အချက်အလက်တွေကို သိမ်းထားပေးမယ့် Web hosting ကြေးလဲ ပေးရပါတယ်။ သူလဲ ပဲ နှစ်စဉ်ကြေးပေးရတာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့ website တစ်ခု အဆင့်အတန်းမီမီ ဖြစ်လာဖို့ကိုလဲ … Web-Designer တစ်ယောက် ယောက်ကို အပ်၊ ဒါမှမဟုတ် ကုပ္မဏီတစ်ခုခုကို အပ်ပြီး Web-Design ကိုဆွဲခိုင်းဖို့လိုပါတယ်။ အဲဒါကလဲ ပိုက်ဆံတော်တော်ကုန်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက Website တွေကို အမြဲတမ်း update လုပ်နေဖို့ဆိုတာကလည်း နည်းပညာဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်တဲ့ သူတွေ အမြဲရှိနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အဲဒီ့လို ငွေကုန်ကြေးကျများခြင်းနဲ့ နည်းပညာဆိုင်ရာအခက်အခဲအချို့က websites တွေ များများစားစားလုပ်မလာကြခြင်းရဲ့ အကြောင်းရင်းတွေဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။
နောက်ပိုင်းမှာ website တွေလုပ်ထားကြပြီး အဲဒီ့ website တွေကို update လုပ်ကြတဲ့အခါမှာ Chronological Order အရ ကာလအလိုက် အစဉ်အတိုင်းထည့်သွင်းတဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်မျိုးတွေဖြစ်လာပါတယ်။ ဒီနေ့အသစ်တစ်ခုထပ်တင်မယ်ဆိုရင် မနေ့ကတင်ထားတဲ့ စာ (သို့မဟုတ်) ပုံရဲ့ အပေါ်ကနေ ပေါ်လာတဲ့ပုံစံမျိုးပါ။ မိမိရဲ့ စာတွေ၊ ပုံတွေ၊ သတင်းအချက်အလက်တွေကို ကွန်ယက် (web) ပေါ်တင်တဲ့နေရာမှာ အစဉ်လိုက်တင်ကြရာကနေ (logging the web) ဆိုတဲ့စကားပေါ်လာပါတယ်။ ဂျပ်စတင်းဟော (Justin Hall) ဆိုတဲ့သူကိုတော့ December 2004 ထုတ် New York Times Magazine က "the founding father of personal blogging." လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ့နောက်မှာတော့ ဂျွန်ဘာဂါ (Jorn Burger)လို့ အမည်ရတဲ့ အမေရိကန်ဘလော့ဂါတစ်ဦးကနေပြီး weblog ဆိုတဲ့စကားလုံးအတွဲအဆက်တစ်ခုကို သူ့ရဲ့ဘလော့ဂ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ www.robotwisdom.com မှာစတင်သုံးစွဲခဲ့ပါတယ်။ Weblog ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာ the Oxford English Dictionary မှာ အမှန်တကယ်တရားဝင် ပါဝင်ခဲ့တာကတော့ ၂၀၀၃ခုနှစ် မတ်လမှဖြစ်ပါတယ်။ "weblog" "weblogging" “weblogger” ဆိုပြီး verb အနေနဲ့ပါဝင်လာခဲ့တာပါ ။ အဲဒီ့နောက်မှာတော့ ပီတာ မားဟော့ဇ် (Peter Merholz) ဆိုသူက weblog ဆိုတဲ့စကားလုံးကို we blog လို့ခွဲချလိုက်ရာကနေ အခုမျက်မှောက်ခေတ်မှာ ခေတ်စားနေတဲ့ ဘလော့ဂ်(Blog) ဆိုတဲ့စကားလုံး ပေါ်ပေါက်လာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ Online Dictionary တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Merriam-Webster's Dictionary ကတော့ Blog ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို the word of the year in 2004 အဖြစ်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ အွန်လိုင်းစွယ်စုံကျမ်းဖြစ်တဲ့ Wikipedia မှာတော့ ဘလော့ဂ်(Blog) ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို ဒီလိုဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။
A blog (a portmanteau of web log) isawebsite where entries are witten in chronological order and commonly displayed in reverse chronological order.
ဘလော့ဂ်ဆိုတာ ၀ပ်ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုပါပဲ ဒါပေမယ့် သူ့အထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ စာတွေ၊ ပုံတွေ၊ အမြဲတမ်းထပ်ထပ်တင်နေတာတွေကို အချိန်ကာလအစဉ်အတိုင်း တင်ထားတဲ့ ၀ပ်ဘ်ဆိုဒ်တွေကိုပဲ နောက်ထပ်အမည်အသစ်တစ်ခုအနေနဲ့ထပ်ပေးလိုက်တာပါ။ ဘလော့ဂ် (Blog) ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို မြန်မာမှုပြုပြီး အွန်လိုင်း ဒိုင်ယာရီလို့သုံးကြတာတွေလဲရှိပါတယ်။ နောက်ပြီး ဘလော့ဂ် (Blog) ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ကြိယာ (Verb) အနေနဲ့လဲ သုံးလို့ရပါတယ်။ အဲဒီ့တော့ ဘလော့ဂ် (Blog)ဆိုတာ မိမိတွေ့ကြုံခံစားလိုက်ရတဲ့ စ်ိတ်ခံစားမှုတွေ၊ မိမိက သူတပါးကိုပြောပြချင်တဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာတွေ၊ မိမိရဲ့ အတွေးအခေါ် အတွေးအမြင်တွေ၊ မိမိသိရှိလိုက်ရတဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေ၊ မိမိဖန်တီးထားတဲ့ အနုပညာလက်ရာတွေ စတာ စတာတွေကို … အွန်လိုင်းပေါ်မှာ မိမိစိတ်တိုင်းကျဖန်တီး တင်ပြနိုင်တဲ့ ကိုယ်ပိုင်နေရာ လေးတွေလို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီ့ မိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်နေရာလေးတွေကို မွမ်းမံပြင်ဆင်တာ၊ အသစ်အသစ်သော တင်ပြမှုတွေကို ထပ်မံဖြည့်စွက် တာစတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုတော့ ဘလော့ဂင်း (Blogging ) လုပ်တယ်လို့ခေါ်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီ့လို အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ကိုယ်ပိုင်နေရာလေးတစ်ခု (Blog လေးတစ်ခု) ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး … ကိုယ့်ဘလော့ဂ်လေးကို လူဖတ်ချင်စဖွယ်ဖြစ်အောင် အပြင်အဆင်တွေနဲ့ တစ်မျိုး၊ တင်ပြမှုတွေနဲ့တဖုံ ဆွဲဆောင်နေပြီး မိမိရဲ့ ဘလော့ဂ်တွေကတဆင့် စာဖတ်သူတွေနဲ့ စကားတွေပြောနေကြတဲ့ သူတွေကိုတော့ ဘလော့ဂါ (Blogger) တွေလို့ခေါ်နိုင်ပါတယ်။
အခုနောက်ပိုင်းမှာ ဘလော့ဂ်တွေရဲ့တိုးပွားမှုနှုန်းဟာ အလွန်လျှင်မြန်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဒါဟာလဲ Domain Name နဲ့ Web hosting ကို Free ပေးနေကြတဲ့ www.blogger.com, www.typepad.com, www.wordpress.com စတဲ့ Website တွေရှိနေလို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ် …။ အဆိုပါ Website တွေကိုသွားပြီး ကိုယ်ပိုင် ဘလော့ဂ်တစ်ခုကို အလွယ်တကူ ဖန်တီးတည်ဆောက်ယူနိုင်ပါတယ်။ နောက်လ တွေမှာ ဘလော့ဂ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အခြားသော စိတ်ပါဝင်စားဖွယ်ရာတွေကို တင်ပြသွားနိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ် …။
ရေးသားသူ - NayPhoneLatt at Friday, November 30, 2007
ဗဟုသုတရလိုက်တာနော်...ကျောက်ခေတ်ကစပြီးတော့ ဘလော့ဂ်ဖြစ်လာရတဲ့ အဆင့်ဆင့်ကို အခုမှပဲသိတော့တယ် ဘလော့ဂ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးနောက်ထပ်ရေးမယ့် ပိုစ့်ကိုလည်း စောင့်နေပါ့မယ် အခုလိုဗဟုသုတတွေ အခုလိုဗဟုသုတတွေ ရသွားတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Can we post in Myanmar font in www.typepad.com, and www.wordpress.com ?
If so, I want to.
သံလွင်အိပ်မက် အွန်လိုင်း မဂ္ဂဇင်း ဆိုတဲ့ စာသားကို အဖြုတ်ခိုင်းတာကို ဘာကြောင့်ပါလိမ့်လို့ ကျနော်လဲ (မနေနိုင် မထိုင်နိုင်) စဉ်းစားမိတယ်။ တခုပဲ စဉ်းစားမိတယ်။ အဲဒီ ဆိုက်ကို လူသိမများစေချင်တာဘဲ နေမယ်။ :D
ကိုနေဘုန်းလတ် ဆောင်းပါးက ပြည့်စုံကောင်းမွန်တယ်ဗျာ။ ခက်တာက ပြည်တွင်းက လူငယ်တယောက်ယောက်က အဲဒီအကြောင်းကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံ နားလည်သွားပြီ ဆိုပါစို့…။ သူကြိုးစားကြည့်ချင်တဲ့ blogger.com ဆိုက်က ပိတ်ပင်ခံထားရတဲ့ ကွက်လပ်ကြီးက ဖြစ်နေပြန်ရော။ ခက်တာပဲနော..။
Blog Time Volume III
ကျွန်တော်လွတ်ကျမှာမဟုတ်တဲ့ Danger Zone
ငွေကြေးနှင့် မသက်ဆိုင်သော တန်ဖိုးများ
ကျွန်တော် နှင့် ပင်ဂွင်းငှက်များ
ကလေး၊ မိဘ နှင့် အနာဂတ်
ကျွန်တော်မသိတော့တဲ့ ကျွန်တော် ...